Vhidhiyo Kushambadzira Matanho e2021 | Martech Zone
Vhidhiyo imwe yenzvimbo iyo ini ndiri kunyatso kuyedza kukwira gore rino. Ini ndichangobva kuita podcast ne Owen weiyo Vhidhiyo Kushambadzira Chikoro uye akandikurudzira kuti ndiwedzere simba mukati. Ini nguva pfupi yapfuura ndakachenesa chiteshi changu cheYouTube - zvese kwandiri pachangu neku Martech Zone )
Ndakavaka yangu home office gore rapfuura uye ndakatenga Logitech BRIO Ultra HD Webcam pamwe na Ecamm Rarama. Ivo vaviri vanopa mufananidzo unoshamisa uye hofisi yangu inoratidzika kunge yakapinza ... saka handina chikonzero chekusaita! Ndinovimbisa kuti ndicharamba ndichishanda pazviri. Zvakaoma kukwana kuti urambe uchitsikisa, iyo podcast, uye bhizinesi rangu… asi ndinoziva kuti ndichabatsirwa nekuisa mukuedza.
Kune mamwe manhamba akasimba anotsigira ekushambadzira evhidhiyo.
Vazhinji se 85% yebhizimisi vakashandisa kushambadzira kwevhidhiyo neimwe nzira kana imwe mu2020. Ndizvozvo kumusoro 24% kubva makore 4 apfuura.
99% yebhizimisi iyo yakashandiswa vhidhiyo gore rapfuura vanoti varonga kuenderera… saka zviri pachena kuti vari kuona kubatsira!
92% yebhizimisi vanozviona sechikamu chakakosha chezano ravo rekushambadzira.
Mhando dzeVhidhiyo Kushambadzira Iyo Inozivikanwa
72% yevatengesi vanoshandisa vhidhiyo kugadzira anotsanangura mavhidhiyo.
49% yevatengesi vanoshandisa vhidhiyo kugadzira mharidzo mavhidhiyo.
48% yevatengesi vanoshandisa vhidhiyo kugadzira zvipupuriro mavhidhiyo.
42% yevatengesi vanoshandisa vhidhiyo kugadzira kutengesa mavhidhiyo
42% yevatengesi vanoshandisa vhidhiyo kugadzira mavhidhiyo kushambadza.
Iwo Wepamusoro Vhidhiyo Maitiro.
Vhidhiyo yekushandisa inoenderera ichikwira!
Kurarama-kutenderera kwaenda nhare.
Mapfupi-mafomu mavhidhiyo anoenderera mberi kutonga ese mapuratifomu.
Mushandisi-inogadzirwa zvemukati zvinotyaira kusangana uye shanduko.
Nekuda kwekushanda kubva kumba uye nedenda, mavhidhiyo edzidzo uye epamhepo ekudzidzisa mavhidhiyo ari kukura mukugamuchirwa uye mukurumbira.
Muna 2020, vhidhiyo kushambadzira inoshandisa muUS yakarova $ 9.95 bhiriyoni. Izvi zvinotarisirwa kuwedzera ne13 muzana kusvika $ 11.24 bhiriyoni mu2021 (Statista, 2019).
Mavhidhiyo ari kutyaira shanduko, makumi masere muzana avo vanoti yavo yekushambadzira vhidhiyo yakanangana nekuwedzera kwekutengesa, uye 80% vanotiwo vari kuwana zvakawanda zvinotungamira.
Musika weAR neVR unotarisirwa kukura pamusoro pemakore mashoma anotevera uye kusvika $ 72.8 bhiriyoni mu2024 (Statista, 2020).
Mavhidhiyo anotenga zvinhu ari kuwedzera.
Inenge vanomwe pagumi varongi vakafanirwa kufambisa yavo chiitiko online mu2020 sechikamu chematanho ekudzivirira kupararira kwehutachiona (PCMA, 2020).
Oberlo, inoshamisa chikuva chevanamuzvinabhizimusi kuti vadzidze, kuvaka uye kukura yavo yecommerce kudonhedza bhizinesi, akaongorora uye akaisa pamwechete iyi yakazara infographic nezvekuti kushambadzira kwevhidhiyo kuri kuramba kuchichinja mu2021.
Joinha Orberlo Yemahara!
Tags: ar mavhidhiyoinfluencer vhidhiyoKushambadzira Vhidhiyooberlomavhidhiyo akasarudzikachaiyo-nguva vhidhiyonyayayakamira videovhidhiyo kushambadziramavhidhiyo manhambamavhidhiyo maitirovr mavhidhiyo